ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊ စကြ ၀ FORာကိုဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသည် အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဓမ္မ | 04/14/2020 | Lost Sheep for Christ
ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊ စကြ ၀ FORာကိုဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသည် အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဓမ္မ | 04/14/2020
ကက်သလစ်ချာ့ချ် CCC ၂၇ ၏ကက်သလစ်ဘာသာ၏ စာမျက်နှာများမှစာမျက်နှာများမှ “ ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်အလိုဆန္ဒသည်လူ့နှလုံးသား၌ရေးထားသည်။ ဘုရားသခင်သည်လူကိုမိမိထံသို့သွေးဆောင်တော်မမူ။ ဘုရားသခင်၌သာသူသည်ရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအမှန်တရားနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
လူသား၏ဂုဏ်သိက္ခာသည်သူနှင့်ဘုရားသခင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောဆိုရန်ဤဖိတ်ကြားချက်သည်လူဖြစ်လာသောအခါလူကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကြောင်းမူကားလူသည်တည်ရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုချစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ။ ၊ သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလွတ်လပ်စွာအသိအမှတ်ပြုပြီးမိမိကိုဖန်တီးသူအားအပ်နှင်းထားခြင်းမရှိလျှင်အမှန်တရားနှင့်အပြည့်အဝမနေထိုင်နိုင်ပါ ။
ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးနှင့်အတူဤချိုမြိန်မှုကိုမျှဝေလိုသောအတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အားညီအစ်ကို၊ သူပေးထားသောနို့နှင့်ပျားရည်တွင်ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအခွင့်ထူးခံကြသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမဖန်ဆင်းမီကမ္ဘာကြီးသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းသည် ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရာဆရာအဖြစ်ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်အား အရာရာကိုတည်ရှိနေစေ ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသတ္တဝါသည်အဘယ်မှ စ၍ သိနိုင်မည်နည်း။ သူဘယ်လိုလုပ်ဖို့နို့နည်းလမ်းများဘယ်လောက်သိခဲ့တာလဲ ကမ္ဘာကြီးကိုရေနဲ့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။ နေနှင့်လကိုဖန်တီးသလား။ ဒါကဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပါဘူး။ မည်သည့်အရာကမိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်သနည်း။ အဆိုပါသူ၏အရေးအသားထံမှ St. Thomas Aquinas အမည်ရှိလိပ်စာဤကိစ္စကို Summa Theologiae Art.1, Obj 1 ” ဒါဟာရန်ပုံပဲ ဖန်တီးဘာမျှမှတစုံတခုကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သြဂတ်စတင်းအဘို့ဤသို့ဆို၏ -“ လုံးဝမတည်ရှိခဲ့ရာများကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေရန်; ဒါပေမယ့်ဖန်တီးမှုဆိုတာဟာပြီးသားအရာတစ်ခုခုထဲကနေထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ပင်အိပ်မက်မြင်နိုင်သည်ထက် ပို၍ ကြီးမြတ်သောအရာတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူဖန်တီးခဲ့သောကောင်းကင်တမန်များသည်ထိုအလှတရားကိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤမျှလှပသောကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေပြီးစကြဝtheာကိုဖန်တီးသူကိုကြားခြင်း၏အံ့“ ဖွယ်ရာ “ ပြီးတော့သူကကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်”!
“ ကောင်းသည် ” ဟုစ ကြာ ၀ iverseာ၏အရှင်သခင် ဟုဘုရားသခင်ပြောခြင်း၏အရေးပါမှု သည်မစုံလင်သောအရာများကိုမပြုလုပ်ပါ၊ မည်သည့်“ ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများ” မှမျှမပြုလုပ်ပါ။ ဂျေရုဆလင်ပြင်ပတွင်ရိတ်သိမ်းသောသံလွင်ပင်မှအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဂျဗာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှသင်ဖမ်းမိသောငါးများ၊ ရိယတ်မြို့ကြီးအပြင်ဘက်တွင်သင်စိုက်ပျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများ ကိုပြုလုပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်၌စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ အဘို့အ ပင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကယောဘကလညျး,
ပညာမရှိဘဲစကားပြောကာမျှနှင့်ငါ့အကြံကိုမိုက်စေသောဤသူကားအဘယ်သူနည်း။ လူယောက်ျားကဲ့သို့သင်၏ခါးကိုစည်းလော့။ ငါမေးမြန်းသောပြyouနာတို့ကိုဖြေလော့။
မြေကြီးအမြစ်ကိုငါတည်သောအခါ၊ သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ နားလည်လျှင်ဘော်ပြလော့။ မည်သူတိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာသည်ကိုသင်မည်သူသေချာသိသနည်း။ သို့မဟုတ်သူကအပေါ်မျဉ်းကိုဆန့်? နံနက်ကြယ်တို့သည်တညီတညွတ်တည်း သီချင်းဆို၍၊ ဘုရားသခင်သားအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်၊ ကြွေးကြော် ကြစဉ် ၊ တိုက်ထောင့်အထွ what်ဖျား သို့အဘယ်သူတက် သနည်း။
သမုဒ္ဒရာ သည်အမိဝမ်းထဲကဘွား။ ထွက်လာသောအခါ ၊ အဘယ်သူသည်တံခါးပိတ်နှင့်ပိတ်ထားသနည်း ။ ငါမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးသည်၎င်း၏အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, လုပ်သည့်အခါ များနှင့်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည်၎င်း၏ swaddling တီးဝိုင်း, ဒါကြောင့်အဘို့သတ်မှတ်ဘောငျ, နှင့်အစုအရက်ဆိုင်များနှင့်တံခါးများ, က, ” ဤရွေ့ကား, သငျသညျ လာ. , အဘယ်သူမျှမဝေးတဲ့, ဒီမှာသင်၏ထောင်လွှားသောလှိုင်းတံပိုးတည်းခိုခံရကြလိမ့်မည် ”?
ဘုရားသခင့်ကြီးမြတ်မှုသည်လောကီစည်းစိမ်အားလုံးထက်သာလွန်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်လူသားဘုရင်ထက်မဆိုသာလွန်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အသေကောင်များ၏စိတ်နှလုံးကိုလောင်စေတတ်၏။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှဝေလိုသောကြောင့်သူသည်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ စိန့်သောမတ်စ်အကွီနပ်စ်ကထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ အထူးသဖြင့်အေးဂျင့်တစ် ဦး အနေဖြင့်တစ်စုံတစ်ရာသောသတ္တဝါတစ်မျိုး၏ထွက်ပေါက်ကိုသာမက၊ နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း၏နာမအားဖြင့်ဒီထုတ်လွှတ်ကျနော်တို့ကိုသတ်မှတ်။ ယခုအဘယ်သို့ အထူးသဖြင့် emanation အား ဖြင့် ဆက်လက် , ထိုထုတ်လွှတ်မှုမှ presupposed မပေးပါ, လူကိုထုတ်လုပ်သောအခါ, သူသည်အရင်ကမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လူကို “လူ – မဟုတ်သော” နှင့်အဖြူကနေဖန်ဆင်းတော်အဖြစ် “အဖြူမဟုတ်သော။ ” ထို့ကြောင့်ပထမနိယာမမှစကြဝuniversalာတစ်ခုလုံး၏အလုံးစုံထွက်ရှိမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ဤမပေါ်ပေါက်မီမည်သည့်အရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ အချည်းနှီးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် မျှမ ဖြစ်ခြင်း။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး ၏မျိုးဆက်သည် “မဖြစ်ခြင်း” မှမဟုတ်သောလူမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းသည်အလုံးစုံဖြစ်တည်မှု၏ထွက်ရှိရာဖြစ်သော ‘မဖြစ်ခြင်း’ မှဖြစ်သော ‘ဘာမျှမဟုတ်သောအရာ’ မှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုကျွန်ုပ်၏ညီအစ်ကို၊ သင့်ကိုလှပစွာစောင်ခြုံခြုံထားအောင်ထိန်းထားသည့်သင်၏မိခင်နှင့်ဖခင်သည်စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သင်၏အပြုံးနှင့်ထိုလှပတင့်တယ်သောမျက်လုံးများကိုသူတို့အလွန်မြတ်နိုးကြပုံ။ သင်၏မျက်နှာ၊ သင်၏ ဦး ခေါင်းပုံသဏ္atာန်ကိုသူတို့ဘယ်လိုရှုမြင်ကြသလဲ။ အဆိုပါသေးငယ်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းသဘောသဘာဝအတွက်, သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ယခုတွင်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဖူးသော်လည်းသင့်ကိုသူစိတ်ထဲပုံသွင်းသည် သူဟာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုသိတယ်ကြင်နာကိုယ်ခန္ဓာ၏သင်သည်အဘယ်သို့ပေးရ, သိတယ် ကိုယ့် သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့သှငျးဖို့။ ဤအင်္ဂါရပ်များအနက်သူသည်သူဖန်တီးခဲ့သောလှပသောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုဝိညာဉ်သည်သူပြုလုပ်သောမည်သည့်ကျောက်တုံးထက်မဆိုအလွန်အဖိုးထိုက်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုအသက်ဝင်စေသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်၏စရိုက်၊ သင်၏ရယ်မောခြင်းနှင့်လူသားတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏စရိုက်ကိုပေးသည်။ “ထို့နောက်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်မှမြေမှုန့်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း မြေပြင်, နှင့် သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇိဝအသက်ကိုမှုတ်; လူသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဖြစ်လေ၏။ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းအရှေ့မျက်နှာ၊ inဒင်အရပ်၌ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလျှင်၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချတော်မူ၏။ ”  အချည်းနှီးနှင့်မှောင်မိုက်၌ရေကိုလွှမ်းမိုးသောတူညီသောစိတ်ဓာတ်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်တူသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစက္ကန့်အတွက်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုမလိုအပ်ပါ။ သူ့ဖန်တီးမှုကိုပျော်မွေ့ရန်ဘယ်သူ့ကိုမှမဖန်တီးခဲ့ပါဘူး။ သူက ငါတို့ မရှိရင်လုပ်နိုင် ပြီးသူ့လက်ရာတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကတစ်ယောက်ယောက်ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးချင်တယ်။ မင်းရာထူးတိုးမြှင့်ခံရတဲ့အခါ၊ မင်းရဲ့ပထမဆုံးသားစဉ်မြေးဆက်တွေ၊ မင်းကိုငါချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း၊ ထာဝရဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း၊ စင်ကြယ်ပြီးအလွန်ချိုမြိန်လှပါတယ်။ သို့သော်ဤ“ ပျားရည်” သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းကင်သို့ရောက်ရှိပြီး Beatific Vision ၌သူ၏တန်ခိုးကြီးသောရောက်ရှိခြင်း၌ရှိသည့်အခါမှသာအရသာ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၊ စွမ်းရည်နှင့်ဘဏ္treာကိုမဖြုန်းတီးပါစေနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်ရှိတိရစ္ဆာန်များနှင့်အပင်များကိုအလွဲသုံးစားမပြုရ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမစို့ t ကို ကျနော်တို့ကရှင်သန်နေသောသညျဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်ကြ၏များအတွက်, အန္တရာယ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသူအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်။ ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသောဆုကျေးဇူးအတွက်ဝမ်းမြောက်။ ကျေးဇူးတင်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်ကြောင့်ထိမိခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူသားတစ် ဦး ထံမှဤကိုးကားချက်အပေါ်ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။
“ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုဤလောက၌သိကျွမ်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်းနှင့်ထာဝရပျော်ရွှင်မှုခံစားရစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသည့်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာကောင်းကင်၌သူနှင့်အတူထာဝရပျော်ရွှင်မှုပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှမြေကြီးပေါ်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတုန့်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤလောကရှိအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ဖန်တီးထားသောလက်ဆောင်များဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာရန်၊ ပို၍ သေချာစွာချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့် ပို၍ သစ္စာရှိရှိဝတ်ပြုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးများကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပြီးအသုံးပြုသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ၀ တ်ပြုခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမျိုးမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသဖြင့်၎င်းတို့ကိုလွှတ်သင့်သည်။
– Loyola ၏စိန့် Ignatius
 ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း CCC27 ၏ဓမ္မဓိism္ဌာန်ကျကျ
 ကမ္ဘာ ဦး ၁း၁-၂
 ယောဘ 38: 1-11
 Summa Theologiae မေးခွန်း 45၊
 ကမ္ဘာ ဦး ၂း၇-၈
← परमेश्वरले यो देख्नु भयो कि यो राम्रो थियो ब्रह्माण्डको लागि भगवानको प्रेम हारून यूसुफ Hackett | धर्मशास्त्र | ०//१//२०२०
Бурхан үүнийг сайн харсан ОРЧЛОН ЕРТӨНЦИЙГ ХАЙРЛАХ БУРХАНЫ ХАЙР Аарон Иосеф Хакетт | Теологи | 04/14/2020-ны өдөр →